Ifektri yegesi, Abaphakeli - Abakhiqizi bakwagesi baseChina China
I-50NG / 50NGS Igesi yemvelo Gesi Setha ukucushwa okukhulu nezici: • Injini esebenza kahle kakhulu yegesi. I-alternator yokuvumelanisa ene-AC. • Isitimela sokuphepha kwegesi kanye nedivayisi yokuvikela igesi ekuvuzeni. • Uhlelo lokupholisa olusebenza ngokushisa okufika kuma-50 ℃. • Ukuhlolwa kwesitolo okuqinile kwawo wonke ama-gensets. • I-Industrial silencer enekhono lokuthulisa i-12-20dB (A). • Uhlelo oluphambili lokulawula injini: Uhlelo lokulawula i-ECI kufaka phakathi: uhlelo lokulahla, uhlelo lokulawula ukuboshwa, uhlelo lokulawula isivinini, i-protec ...
I-50NG / 50NGS Igesi yemvelo Gesi Setha ukucushwa okukhulu nezici: • Injini esebenza kahle kakhulu yegesi. • I-alternator yokuvumelanisa ye-AC. • Isitimela sokuphepha igesi nedivayisi yokuvikela igesi ekuvikelekeni. • Isistimu yokupholisa efanelekile emazingeni okushisa afinyelela kuma-50 ℃. • Ukuhlolwa kwesitolo okuqinile kwawo wonke ama-gensets. • I-Industrial silencer enekhono lokuthulisa i-12-20dB (A). • Uhlelo lokulawula injini oluthuthukisiwe: Uhlelo lokulawula i-ECI kufaka phakathi: uhlelo lokushisa, uhlelo lokulawula ukuqhuma, uhlelo lokulawula isivinini, uhlelo lokuvikela ...
80NG / 80NGS igesi yemvelo Generator Setha ukumiswa okuyinhloko nezici: • Injini yegesi esebenza kahle kakhulu. I-alternator yokuvumelanisa ene-AC. • Isitimela sokuphepha kwegesi kanye nedivayisi yokuvikela igesi ekuvuzeni. • Uhlelo lokupholisa olusebenza ngokushisa okufika kuma-50 ℃. • Ukuhlolwa kwesitolo okuqinile kwawo wonke ama-gensets. • I-Industrial silencer enekhono lokuthulisa i-12-20dB (A). • Uhlelo oluphambili lokulawula injini: Uhlelo lokulawula i-ECI kufaka phakathi: uhlelo lokulahla, uhlelo lokulawula ukuboshwa, uhlelo lokulawula isivinini, i-protec ...
1.Imininingwane yezobuchwepheshe isuselwe kugesi yemvelo enenani le-calorific le-10 kWh / Nm³ ne-methane no. > 90% 2. Imininingwane yobuchwepheshe isuselwa kuma-biogas anenani lekhalori elingu-6 kWh / Nm³ kanye ne-methane no. > 60%
Injini esebenza kahle kakhulu yegesi. I-alternator yokuvumelanisa ene-AC. Isitimela sokuphepha kwegesi nedivayisi yokuvikela igesi ekuvuzeni. Isimiso sokupholisa esifanele ukushisa kuma kuze kufike ku-50 ℃.
Injini esebenza kahle kakhulu yegesi. I-alternator yokuvumelanisa ene-AC. Isitimela sokuphepha kwegesi nedivayisi yokuvikela igesi ekuvuzeni.
Injini esebenza kahle kakhulu yegesi. I-AC enye evumelanisayo. Isitimela sokuphepha kwegesi nedivayisi yokuvikela igesi ekuvuzeni.
I-GE 1500NG & NGS-TCG2020V16-ML-EN-400V
Dizeli Jenereta Enenjini Ye Kubota, I-240kw Generator, Izintengo ze-Diesel Generator, IGenerator Encane, Amanani weGenerator, Ukuthengisa Okusetshenzisiwe Kwesenzi,